Degmadda Bardaale ee Gobalka Baay oo Golle degaan yeelatay Markii ugu horeysay (dhegayso) – Radio Daljir
Degmadda Bardaale ee Gobalka Baay oo Golle degaan yeelatay Markii ugu horeysay (dhegayso)
Janaayo 27, 2018 12:51 g 0
Degmadda bardaale oo ka tirsan gobolka baay 60 KM Dhinaca galbeed kaga beegan degmada baydhabo ayaa taariikhda markii u horaysay yeelatay Golle degaan oo dadka degaanku ay sooo doorteen .
Golaha degaana ooo ka kooban 21 Xubnood ayaa Xubin kasta waxaa soo doortay 5 mid ah qaabilka degaankaas dega waxaana tirada Ergada wax doooratay ay noqonaysa 105 Xubnood .
Intaas ka dib ayaa goluhu wuxu doortay gudoomiye iyo ku xigeen waxaana gudoomiye loo dooortay saalax Axmed Sheikh Halka ku xigeenka loo doortay Maxamed Sheikh Nuunaay.
Doorashada Wxaaa gooobjoog ahaa Madaxweynaha koonfur galbeed iyo Wasiir ki xigeeenka wasaaarada Arimaha gudaha Xukuumada Sooomaliya .
Hadaba si aan wax badan uga ogaano sid ay doorashadu u dhacday waxaanu waraysi la yeelanay Maxamed Sheikh Xasan oo Horay gudoomiye uga soonoqday degmada bardaale hadan aah Xubiin ka tirsan baarlamanak aa doortay Cabd Xakiin Xusein Xasan oo Garoowe jooga ayuu u waramay
Dhaqan Rogankii ku dhacay Afkeena Somaaliga Maxaa laga barran karaa (dhegayso)